လိုက်ဖက်တဲ့ application များ OS X El capitan | ငါက Mac ကပါ
Jordi Gimenez | | Mac က App Store ကို, Mac OS X ကို, OS X ကိုအယ်လ် Capitan
တဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသာလာသည်နှင့်နေ့လည်ခင်းပြီးနောက်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုများနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံး OS X El Capitan 10.11 ၏တရားဝင်အများပြည်သူသိရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ သင့်အများစုသည်အချို့သော application များအားလုံးအဆင်မပြေပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်မည့်အနေအထားတွင်ရှိနေလိမ့်မည် သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ပါလိမ့်မည် မွမ်းမံပြီးနောက်.
အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မှုနည်းပါးလာခြင်းနှင့် developer များက ၄ င်းတို့ app အသစ်များ၏ဗားရှင်းအသစ်များကို၎င်းတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းသော်၎င်း၊ လွှတ်တင်ပြီးနောက်နာရီပိုင်းအတွင်းတွင်ဖြစ်စေဖြန့်ချိရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်။ သို့သော် operating system ကိုမွမ်းမံမီကျွန်ုပ်တို့အမြဲသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ၏အဘယျသို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးအသုံးပြုသော application များသည်ဗားရှင်းအသစ်ကိုပြproblemနာမရှိဘဲထောက်ခံသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ OS X El Capitan ဗားရှင်းအသစ်မှာ application တွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်သာရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ developer များက application အသစ်ကို system အသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အမြန်ဆုံး update လုပ်ရမယ်။
San Francisco စာလုံး မှလွဲ၍ အထွေထွေဗေဒ၏စည်းကမ်းချက်များတွင်အပြောင်းအလဲမရှိပါ အချို့သည်မွမ်းမံခြင်းပြီးနောက်ပျက်ကွက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လုံးဝအလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ ဒါကြောင့်ဒီကနေကျွန်တော်တို့အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ application တွေရဲ့ updates တွေကိုစစ်ဆေးဖို့၊ update မလုပ်ခင် OS X El Capitan မှာသူတို့အလုပ်လုပ်လားဆိုတာစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပါက၊ developer ကိုသင်စောင့်ဆိုင်းရပါမည်။ သို့သော်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအနည်းငယ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြီးပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသည် OS X El Capitan အတွက်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်
Parallells ?? ငါထင်တာကတော့မင်းမှာနောက်ဆုံး version ရှိရမယ်
Autocad 2015 သည် operating system အသစ်နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ 🙁
Cristina Pons ဟုသူကပြောသည်
Kevin, မင်းငါ့ကိုပြproblemနာတက်တယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Cristina Pons သို့ပြန်သွားပါ
ငါနားလည်သကဲ့သို့စပ်စုစဉ်းစား, osx yosemite နှင့် el capitan အတူတူပင်ရင်းကုဒ်ကိုအတူတူ။ Adobe Photoshoplightroom5လည်း?
ကျွန်ုပ်သည် 7MB ထက်ကြီးသော jpg ဓာတ်ပုံများကိုပြသရန် Preview တွင်ပြaနာရှိနေသည်။ အဆိုပါပြproblemနာက OS X 10.11 ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်စတင်ခဲ့သည်
Joel Jesus အားပြန်ပြောပါ
Autocad သည် OS X El capitan စနစ်အသစ်တွင်အဆက်မပြတ်ပျက်သွားသည်။ ၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ ...
autocad 2015 နဲ့လည်းငါ့မှာဖြစ်ပျက်တယ်။
Alejandro Luna ဟုသူကပြောသည်
အီးမေးလ်များသည်မေးလ်ထဲသို့ဆက်လာသည်၊ သို့သော်ငါ ဆက်၍ မပို့နိုင်တော့ပါ။ ငါ iMac နှင့် Macbook Air နှစ်ခုလုံးကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးနှစ်ခုစလုံးတွင်အတူတူဖြစ်သည်။ ကြောင်းပြproblemနာနှင့်အတူအခြားမည်သူမဆို?
Alejandro Luna အားပြန်ကြားပါ
ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီ၊ အနည်းဆုံး Air လေ။ ဖြေရှင်းချက်
Manoo Ruiz ဟုသူကပြောသည်
INDESING CS6 ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
manoo ruiz သို့ပြန်သွားရန်
Autocad 2015 နဲ့လည်းအတူတူပဲ
အဆိုပါနည်းပြ 2015 လိုပဲမဆိုထောက်ခံချက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ???
autocad *** တစ်စုံတစ် ဦး ကအဖြေရှိပါတယ်
သင်ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား၊ သင်ဒီမှာမျှဝေသောအဖြေကိုတစ်ယောက်ယောက်ကရှာတွေ့ပါ့မလား။ 🙂
AUTOCAD2014 ၂၀၁၅ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ EL CAPITAN မှာ BOOTCAMP ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တယ်။
Autocad တွင်ကပ္ပတိန်ကိုမွမ်းမံပြီးနောက်သူကဆက်တိုက်ပိတ်သည်၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုတပ်ဆင်သော်လည်း၎င်းသည်တူညီနေဆဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်များစွာလိုအပ်နေသည်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကအဖြေရှာပြီးပြီလား
froy gallegos အားပြန်ပြောပါ
El Capitan နှင့် Autocad 2014 အလုပ်လုပ်ရန်မည်သူမဆိုသိလား။ ငါနည်းပြနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်နှင့်ငါမနိုင် ...
အဖြေရှာစရာမလိုဘဲရုန်းကန်နေရပြီးနောက်ကပ္ပတိန်တွင် autocad ကိုမလုပ်ခဲ့သူအားလုံးအတွက်၊ ဒီပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့် autocad 2016 ထွက်လာချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ယာယီတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ သင်၏ beta ကို Autocad mandalore ဟုခေါ်သည်။ ကပ္ပတိန်မှာအလုပ်ဖြစ်တယ်၊
အန်တိုနီယို ခရမ် ဟုသူကပြောသည်
Preview, XtraFinder, Vector Magic, etc ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရစ်စမတ်အပြီးမှာသူတို့ဟာအမှားတွေကိုမပြင်ခင်ဒါမှမဟုတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရှာဖို့အက်ပလီကေးရှင်းတွေမွမ်းမံတဲ့အထိငါသိလိမ့်မယ်။
Antonio Krohm အားပြန်ပြောပါ
အန်တိုနီယိုသည်သူသည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသောကြောင့်၎င်း beta actucad ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်အား x အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းမရှိပါ။ သင်ဘယ်လို activate ခဲ့တာလဲ
Claudio Aguirre ဟုသူကပြောသည်
Mac အတွက် Autocad မစတင်ပါဘူး၊ ၁၀ မိနစ်လောက်တိုင်းမှာ Outlook ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
Claudio Aguirre သို့ပြန်သွားပါ
ငါအတူတူပါပဲ .. ငါ၏အ Outlook က 10 မိနစ်တိုင်းအလုပ်လုပ်ရပ်တန့် .. မဆိုဖြေရှင်းချက် ??? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းသော Nueria, Outlook အတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်အခြားအဘယ်သူမျှမရှိပုံရသည်: https://www.soydemac.com/microsoft-trabaja-para-intentar-solucionar-los-bugs-de-office-2016-en-mac/
ငါဘယ်လို activate လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ထပ်တူထပ်မျှသံသယရှိတယ်။
မည်သူမဆို Yosemite စနစ်သို့ပြန်သွားရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား။
ဤကိရိယာများကိုမကြာမီမွမ်းမံရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ AutoCad အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ယခင်ခြေလှမ်းရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒီမှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်မှ
ယခုအချိန်တွင် Autodesk ၏တရားဝင် update ကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမတိုင်မီအထိဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီအကြောင်းရေးပြီးသူတို့ရဲ့လှူဒါန်းမှုအတွက် froy gallegos ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ Yosemite ကိုပြန်သွားနိုင်သလား? အဆိုပါနည်းပြကိုဖျက်ပစ်သည်မဟုတ်လော ၎င်းသည်ပင်လယ်ဓားပြတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် autocad မရှိတော့ပါ။ အယ်လ် Capitan နှင့်အတူကပိတ်! ကျေးဇူးပြု၍ ဘာလုပ်လို့ရမလဲ အဖြစ်?
ဟိုင်း Silvia၊ ဒီ link ကိုကြည့်ပါ။ https://www.soydemac.com/parche-solucion-para-los-problemas-de-autocad-con-os-x-el-capitan/
ငါက Apple ကိုပြောပြီး Yosemite ကိုပြန်သွားတဲ့အခါ install လုပ်ထားတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအားလုံးကိုဖျက်လိုက်ပြီ။
ဒါကြောင့် Autocad ကဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့ patch တစ်ခုကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာကဘာမှမဖျက်စရာမလိုပဲငါ့ကိုပြောပြတယ်။
ငါတင်ပေးတဲ့ link ကိုကြည့်ပြီးပြီလား
Que Adobe မှ Audition မမျှော်လင့်ဘဲရပ်လိုက်သည်
Autocad Mandalore ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်၊ ၎င်းသည်နံပါတ်စဉ်ကိုတောင်း။ ၆၆၆-၆၉၆၉၆၉၆ ကိုထည့်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ
Alejandro Benavides ဟုသူကပြောသည်
Archicad 18 သည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ မကြာခဏပိတ်ပါသည်၊ အလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
Alejandro Benavides အားပြန်ပြောပါ
ဒုတိယ Captain Update ပြီးနောက်ကား Cad သည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပြိုလဲခြင်းမရှိတော့ဘဲသင် 100% အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဘာဒုတိယ update လဲ။
App Store ၏နောက်ဆုံးသတင်းများအရ El Capitan မှ update အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီး၎င်းသည်ကွန်ပျူတာ၏တည်ငြိမ်မှု၊ ငါ့မှာဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါက Autocad 13 (Yosemite နဲ့ကျွန်တော်တပ်ဆင်ခဲ့တဲ့) ပြန်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။
Miguel Ferraro ဟုသူကပြောသည်
Archicad 18 တွင်အလုပ်မလုပ်သော tools အချို့ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် "Tag and Categories" command သည်အပြောင်းအလဲများကိုမပြုလုပ်ပါ။ option သည်ပေါ်လာသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
Miguel Ferraro အားပြန်ပြောပါ
မည်သည့် MAC အတွက် AUTOCAD သည် Captain နှင့်ပေါင်းသင်းမည်နည်း။
Martin Delgado ဟုသူကပြောသည်
၂၀၁၅ တွင်အလွန်ကောင်းသည်။ အဆင့် ၃ တွင် AUTODESCK တွင်ချထားသည့်အရာများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အိုင်တီသည်ထူးကဲသောနှုတ်ခွန်းဆက်မှုများကိုဖြစ်စေသည်။
Martin Delgado သို့ပြန်သွားပါ
ကားလို့စ် Madrigal ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာတင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အဆင်မပြေသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေမည်။
Carlos Madrigal ကိုပြန်သွားပါ
Jairo santos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်သူငယ်ချင်းများ ကျွန်တော့်နာမည် Jairo Santos ပါ။ ကျွန်မဟာ Grupo NYM ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ AUOTDESK ဘာသာရပ်မှာအထူးကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သင်၏ AutoCAD ကိုမည်သည့်ပြwithoutနာမှမသုံးပဲဆက်လက်ကူးယူနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ကိုအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင့်တွင် suite၊ update သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်ပါကသင့်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရှိနေလျှင်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုဤမျှလောက်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားခဲ့မည်။ https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-for-mac/troubleshooting//sfdcarticles/Mac-OS-X-v10-11-x-El-Capitan-compatibility-with-AutoCAD-for-Mac-and-AutoCAD-LT-for-Mac.html
Jairo Santos သို့ပြန်သွားပါ
မည်သူမဆို AUTOCAD ၂၀၁၅ သည် EL CAPITAN တွင်ကောင်းစွာလည်ပတ်နေမည်ဆိုလျှင်သိပါသလား။ အဘယ်Капитанဗားရှင်း? ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တွင် Macbook Pro ရှိပြီးကွန်ယက်အမြောက်အများကို WiFi မှတဆင့်ချိတ်ဆက်သည်။ အချို့သောကွန်ယက်များသည် DHCP ပါရှိပြီးအချို့မှာလက်စွဲဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်အကြိုက်များဘောင်တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်အလိုအလျောက်ဝယ်လိုအားကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကွန်ရက်တူ)
Isaacf။ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% Adobe စာရင်းစစ်များအသုံးပြုသူဖြစ်ပြီး el capitan ကို update လုပ်သောအခါ .. ကျွန်ုပ်သည်ဤကွန်ပျူတာကိုပျက်သွားတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် session တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းသည်မမျှော်လင့်ဘဲအဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုပိတ်သွားစေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ပြီးသောဖိုင်များကိုဆုံးရှုံးသွားသည်။ ကျွမ်းကျင်သည်။ သူတို့သည်စနစ်တွင်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Isaac ဇာက်ကိုf။
« el capitan » update အသစ်ကို install လုပ်ပြီး vectori မှော်အလုပ်မလုပ်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်ပြောပါရစေ၊ ၎င်းသည်ကောင်းစွာဖွင့်ပြီး၊ ပုံကိုဖွင့်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်၊ ငါလုပ်နိုင်တယ်၊
vector magic အတွက်အလုပ်လုပ်ပုံအဖြေကိုရှာတွေ့ပြီ။ ငါ link ကိုချန်ထားသည်။ https://georgegarside.com/blog/osx/vector-magic-crash-el-capitan/
Ayam_me ပါ ဟုသူကပြောသည်
အဲဒီစာမျက်နှာသေသွားတယ် ... ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ (တတိယစာမျက်နှာနဲ့တူတယ်၊ အဲဒါကိုသူတို့အဲဒီမှာရှာနိုင်တယ်၊ နောက်အဖြေကိုလည်းငါရှာလို့မရဘူး) /
လူများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ crack နှင့်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များ (AI, PS, ID စသည်ကဲ့သို့ပင်လယ်ဓားပြများ) မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မည်ကိုသင်သိပါသလား။ အဲဒါတွေကိုငါအမြဲတမ်းသုံးပြီးအဲဒါမပါဘဲ Mac မရှိဘူး။
MAC ပေါ်တွင် OUTLOOK ကိုသုံးသောသူများအတွက်သူတို့မည်သို့လုပ်သနည်း။ ဒါ့အတွက်လည်းပေးရမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မည်သူမဆို archicad 19 run ပါသလား ??? အယ်လ် Capitan အတွက်ပြproblemsနာမရှိ။
မေးလ်အကောင့်များကိုသာတပ်ဆင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် Outlook နှင့်ဂျီမေးလ်ရှိပြီးအီးမေးလ်များကို Mails အက်ပ်သို့ပို့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ el capitan စနစ်ဖြင့် Mac အသစ်တစ်ခုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ် quarkXpress ကိုမမျှော်လင့်ဘဲပိတ်မိသောမည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုထည့်သွင်းသောအခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသည်။
ငါနဲ့လည်းအတူတူပဲ၊ ငါ winonx နဲ့ဆမ်ထုတ်လွှင့်မှုကိုမသုံးနိုင်ဘူး
QUARKXPRESS 10. နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ စနစ်တွင် El Capitan ဖွင့်သည်နှင့်ချက်ခြင်းပိတ်ထားသည်။ အဖြေကိုသိသူတစ် ဦး သည်လက်ကိုပေးနိုင်သလော။
José Luis အားပြန်ပြောပါ